That's so good, right?: ထိတ်လန့်စရာ တစ်ကိုယ်ရည်စိတ်ဖြေမှု အလွဲများ (18+ အမျိုးသားကျန်းမာရေး)
ထိတ်လန့်စရာ တစ်ကိုယ်ရည်စိတ်ဖြေမှု အလွဲများ (18+ အမျိုးသားကျန်းမာရေး)
လေ့လာမှုစစ်တမ်းတွေအရ ဆယ်ကျော်သက်ယောင်္ကျားလေးတွေဟာ မိန်းကလေးတွေထက် တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမှုကို ပိုမိုလုပ်ဆောင်တတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒါဟာ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်အံ့အားသင့်ပြီး ထိတ်လန့်စရာကောင်းတာက တစ်ကိုယ်ရည်စိတ်ဖြေမှု အလွဲတွေနဲ့ အဖြစ်ဆိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ သတိပြုဆင်ခြင်နိုင်အောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
လိင်တံနဲ့ ဆီးလမ်းကြောင်းအတွင်း ပြွန်ချောင်းထိုးထည့်ခြင်း
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အသက်(၄၀)အရွယ်အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဖို့အတွက် သူ့ရဲ့ ဆီးအိတ်ထဲကို (၅၅)လက်မအရှည်ရှိတဲ့ ပြွန်ချောင်းတစ်ချောင်းထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီပြွန်ချောင်းဟာ သူ့ရဲ့ဆီးလမ်းကြောင်းထဲမှာ (၂)နှစ်ကြာအောင်ရှိခဲ့ပြီးမှ ခွဲစိတ်ဖယ်ထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆီးလမ်းကြောင်းထဲကို ရှားဇောင်းလက်ပတ်ပင်အစိတ်အပိုင်း ထည့်သွင်းတဲ့လူလည်းရှိပါသေးတယ်။ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ၀ိုင်ယာကြိုးတစ်ချောင်းထည့်သွင်းတာဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ဆီးအိတ်ထဲမှာ လုံးထွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ဆီးလမ်းကြောင်းထဲကို ပြွှန်တွေထိုးထည့်တာဟာ သူတို့အတွက် ခံစားမှုကောင်းစေပြီး စိတ်ကျေနပ်စရာအဖြစ်ခံစားရတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ပြောဖို့လိုမယ်မထင်ပါဘူး။ ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆီကို နာကျဉ်ခံစားရပြီး ရှက်စရာမျက်နှာနဲ့ သွားမတွေ့ချင်ဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုဟာမျိုးကိုမှ သင့်ပစ္စည်းထဲမထည့်သွင်းပါနဲ့။
မိန်းကလေးက အပေါ်ကနေပြီး ပွဲကြမ်းလိုက်လို့ လိင်တံကျိုးသွားပြီး ကျေနပ်စရာတွေ ပျောက်ကွယ်ကာ နာကျင်မှုတွေခံစားရတတ်တဲ့အကြောင်းကို ကြားဖူးကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စမျိုးက တစ်ယောက်တည်း အာသာဖြေရင်းနဲ့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့သူတစ်ဦးကတော့ လိင်တံအောက်ခြေကို ဘယ်ဖက် လက်မ၊ လက်ညှိုးတို့နဲ့ ကိုင်ထားရင်း ညာဖက်လက်နဲ့ အပေါ်ကိုဆွဲလှန်လိုက်ရာကနေ လက်ဆစ်ချိုးသလို “တောက်”ဆိုတဲ့ အသံနဲ့အတူ ကျိုးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ ကံကောင်းပါတယ်။ ခွဲစိတ်ကုသပြီး (၅)ရက်အကြာမှာ အရင်လိုပဲ ထောင်မတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သတိထားပါ။ တစ်ကိုယ်ရေ စိတ်ဖြေရင်းကနေ တစ်ဘ၀ မျိုးကန်းသွားတဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်း ကုသမှုခံယူဖို့ ဆရာဝန်ကို ပြောပြရာမှာ တော်တော်ရှက်စရာကောင်းတဲ့ကိစ္စပါ။ ဒါ့ကြောင့် အဆန်းတွေမထွင်ပါနဲ့။ စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်လည်း ပုံမှန်နည်းလမ်းတွေပဲ သုံးပါ။
တကိုယ်ရေစိတ်ဖြေရင် အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်ဆိုရင် ယုံနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တကယ်သေနိုင်လောက်ပါတယ်။ လိင်ဆက်ဆံနေချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တကိုယ်ရေစိတ်ဖြေနေချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဦးနှောက်အတွင်း အောက်စီဂျင်အလုံအလောက်မရောက်တဲ့ autoerotic asphyxiation ခေါ် အခြေအနေမျိုး ဖြစ်ရင် အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ အသက်ရှုမ၀မွန်းကျပ်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အောင် ပြုလုပ်ပြီး ဦးနှောက်ဆီကို အောင်စီဂျင်ပြတ်လပ်အောင်လုပ်တာက ကိစ္စပြီးတဲ့အချိန်မှာ သာယာမှုကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါက တလွဲကြီးပဲလို့ သင်ထင်မှာပါ။ ကွန်ဖူးသရုပ်ဆောင် David Carradine ဟာ ဒီလိုနည်းနဲ့ တစ်ကိုယ်ရေစိတ်ဖြေရင်း သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အလောင်းကို ရဲတွေက တွေ့ရှိချိန်မှာ လည်ပင်းနဲ့ လိင်တံတို့မှာ ကြိုးတွေချည်ထားတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
Thorn Htet (© Gentleman Magazine)
ဆိုဒ် ကြီးအောင်လုပ်လို့ရလား ?(18+အမျိုးသားများသာ)
အင်္ဂါကြီးအောင်လုပ်လို့ ရတဲ့နည်းလမ်းတွေ ရှိပါသလား ? ဘေးအန္တရာယ်ရော ကင်းရဲ့လား ? ခွဲစိတ်ပြုပြင်လို့ ရော ရနိုင်လား ? ယောင်္ကျားလေးတွေ အမေးများတဲ့ မေးခွန်းတွေပါ။ ယောင်္ကျားလေး တော်တော်များများက သူတို့ လိင်တံကို ရှိရင်းစွဲ အရွယ်အစားထက် ကြီးစေချင်တတ်ကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လိင်တံကြီးတဲ့အခါမှာ မိန်းကလေးတွေက ပိုသဘောကျတယ်လို့ ထင်ကြလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ မိန်းကလေးတွေက သူတို့ပါတနာရဲ့ ပစ္စည်းအရွယ်အစားထက် အထိအတွေ့၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေနဲ့ ချစ်တင်းနှောတဲ့နည်းစနစ်တွေစတဲ့ အရေးကိစ္စတွေပေါ်မှာ ပိုမိုသာယာခံစားတတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း အမျိုးသားတွေက သူတို့လိင်တံအရွယ်အစားကို ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ဖို့ စိတ်သန်နေကြတုန်းပါပဲ။ ကုလားရှင်ပြုသလို ထိပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့နည်းက အပြင်ကိုအနည်းငယ်ရှည်ထွက်လာစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ အမာရွတ်ကျန်နေခဲ့ရင် အချိန်ကြာကြာထောင်မတ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်သလို နာကျဉ်မှုကိုလည်း ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အဆီထိုးသွင်းတဲ့နည်းလမ်းကရော။ ဒီနည်းလမ်းက သင့်ပစ္စည်းကို အနည်းငယ် ပိုကြီးလာစေနိုင်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းကတော့ အမျိုးသားတွေရဲ့ ပစ္စည်းကို အရှည်ရော လုံးပတ်ပါ ကြီးလာစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ကိရိယာတွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းတွေကို အ၀တ်အစားအောက်မှာနေ့တိုင်းဝတ်ဆင်ထားရမှာ ဖြစ်ပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတာကို စမ်းသပ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သောက်လို့ရတဲ့ ဆေးဝါးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ခိုင်လုံတဲ့သက်သေအထောက်အထားမရှိပါဘူး။
တကယ်တမ်းတော့ ကိုယ့်ပစ္စည်းကို သေးတယ်လို့ထင်နေကြတဲ့ အမျိုးသားတိုင်းမှာ ပုံမှန်အရွယ်အစားရှိနေပြီးသားပါ။ လက်ရှိအရွယ်အစားနဲ့ အဆင်ပြေတဲ့ပါတနာကို ကြုံတွေ့နေရမယ်ဆိုရင် ဒီအတိုင်းကိုပဲ ယုံကြည်မှုရှိနေမှာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း အမျိုးသားတွေက အပြာကားတွေထဲက အရွယ်အစားတွေကိုကြည့်ပြီး စိတ်အားငယ်နေတတ်ကြပါသေးတယ်။ သတိထားရမှာက ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ် ဂရုစိုက်ပါ။ ရေရှည်အသုံးခံပြီး ဘေးကင်းဖို့က အဓိကဆိုတာကို မမေ့ပါနဲ့။
ရှိသင့် တဲ့ ဆုိုဒ် အရွယ်အစားကို ကြည့်ချင်ရင် ဒီ http://genitalsize.com/မှာသွားကြည့်လို့ရပါတယ်....
Posted by Alex Aung at 4:13 PM
Labels: News and Info, Sexual Health
ကျားအင်္ဂါ ကျန်းမာရေး (အမျိုးသားကျန်းမာရေး)
ထိတ်လန့်စရာ တစ်ကိုယ်ရည်စိတ်ဖြေမှု အလွဲများ (18+ အမျ...
Dropping the Soap : Part 2